» चर्चामा हरि खड्का र युमी बलामीको जोडी
चर्चामा हरि खड्का र युमी बलामीको जोडी
२२ भाद्र २०७७, सोमबार ०७:३१
चन्द्र घलान, मकवानपुर, २२ भदौ । लगातार खेल मैदानमा फुटबल खेलेर ख्याति कमाएका प्रसिद्ध फुटबलरले डान्स गर्यो भने कस्तो देखिएला ? फुटबलरभित्र रहेको डान्सरलाई दर्शकसामु प्रस्तुत गर्न एउटी कोरियोग्राफरले कति मेहनत गर्नुपर्ला ? फुटबल खेलमा तहल्का पिटेका खेलाडीले डान्समा कस्तो तहल्का मच्चाउँलान् ? अनि एउटी कोरियोग्राफरले आफै डान्सरका रुपमा कति तहल्का मच्चाउँलिन् ? चर्चित डान्सिङ रियालिटी शो ‘डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपाल’ ले यस्तै प्रश्न खडा गरिदिएको छ । अनि छिट्टै यी प्रश्नहरुको जवाफ पनि दिँदैछ । राष्ट्रिय फुटबल टिमका पूर्व कप्तान हरि खड्का र चर्चित कोरियोग्राफर युमी बलामी अहिले चर्चाको शिखरमा छन् । खेलाडी र कोरियोग्राफरको यो जोडीले अहिले चौतर्फि प्रशंसा पाईरहेको छ । यस भिडियो सामग्रीमा चर्चित फुटबलर हरि खड्का र कोरियोग्राफर युमी बलामीको बारेमा छोटो चर्चा गरिएको छ । हेर्नुहोस् यो भिडियो फिचर–
हरि खड्का चर्चित पुर्व नेपाली फुटबलर हुन् । नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका पूर्व कप्तान खड्का महिला राष्ट्रिय टोलीका पूर्व प्रशिक्षक पनि हुन् । देशका लागि सर्वाधिक अन्तर्राष्ट्रिय गोल गर्ने दुई मध्ये खड्का एक हुन् । उनले र नीराजन रायमाझीले समान १३ गोल गरेका छन् । राष्ट्रिय फुटबल जीवनमा पुर्णविराम लगाएका खड्का हाल भने विभिन्न राष्ट्रिय लिगका क्लबहरूमा प्रशिक्षण दिने काम गर्छन् । फिफा ‘ए’ तह तालिम कार्यक्रममा पनि उनले भाग लिएका छन् । भारत तथा बङ्गलादेशका विभिन्न क्लबमा आफ्नो क्षमता प्रस्तुत गरेका हरिले एक सिजन बङ्गलादेशको मोहम्मडन क्लबमा मासिक दुई हजार अमेरीकी डलरसम्म पारीश्रमिक पाएका थिए । ती क्लबहरूमा गरेको प्रदर्शनकै कारण अहिलेसम्म पनि दक्षिण एसियाका मुलुकमा नेपाली टोली जाँदा उनको खोजी हुनेगर्छ । पूर्वी नेपालको झापा जिल्ला अन्तर्गत चन्द्रगढीमा बाबु ललितबहादुर खड्का र आमा ज्ञानुमाया खड्काको जेठो छोराको रुपमा वि.संं २०३२ फागुन २८ गते हरि खड्काको जन्म भएको हो ।
बाल्यकालदेखि नै चञ्चले स्वभावका हरि खड्काको एक भाई र एक बहिनी छन् । चन्द्रगढीको विरेन्द्र माध्यमिक विद्यालयमा औपचारिक शिक्षा लिएका हरिले सुरुमा पढाईमा निकै रुची देखाएता पनि उमेर बढेसँगै पढाईमा भन्दा फुटबलमा विशेष रुचि देखाएका थिए । फुटबल खेल्दा परिवारबाट त्यति सहयोग प्राप्त नभएपछि उनी परिवारलाई थाह नदिई फुटबल खेल्न जाने गर्थे । वि.सं. २०४८ सालमा झापाको मुनाल क्लबबाट खेलेका खड्काले मुनाल च्यालेन्ज कपको विजेता र त्यस प्रतियोगिताको बेस्ट प्लेयर भए । उक्त खेलमा हरि विजयी भएको समाचार रेडियो नेपालबाट उनको बुवाको नामसहित प्रसारण भएको थियो । त्यसपछि भने हरिलाई परिवारबाट पनि फुटबल खेल्न सहयोग पुग्यो ।
सन १९९३ मा सानमिगल युथ कपको लागि झापा जिल्लाको यु–१६ मा पर्दै उनले राम्रो प्रदर्शन गरेका थिए । उनले त्यस समयमा जर्मनमा ४५ दिनका लागि फुटबल सिक्ने स्कलरसिप पनि पाएका थिए । वि.सं. २०५२ सालमा नेपाली फुटबलको चिरपरिचित क्लब न्यु रोड टिममा एक वर्ष आबद्ध हुँदा सहिद स्मारक ए डिभिजन लिग जित्नमा पनि उनले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । वि.सं. २०५३ सालदेखि विभागीय टिम नेपाल पुलिस क्लबमा १३ वर्ष आफ्नो खेल जिवन बिताएका हरिले पछि व्यवस्थापकको समेत भूमिका निर्वाह गरेका थिए । १३ वर्ष सम्म नेपाल पुलिस क्लबमा रहेका हरि खड्का सन १९९५ देखि २००७ सम्म लगातार राष्ट्रिय जर्सीमा नेपाली अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीको अनुभव बोकेका थिए । उनले खेलेका प्राय खेलमा उनले गोल नगरेको खेल विरलै हुन्थे । वि.सं. २०५८ सालमा उनको विवाह भयो । उनका छोराको नामपनि फ्रान्सेली फुटबलर खेलाडीको नामबाट हेनरी राखेका छन् ।
युमी बलामी चर्चित कोरियोग्राफर, डान्सर र मोडल हुन् । एनवाई फ्याम डान्स स्टुडियोकी सञ्चालिका समेत रहेकी युमी प्रोफेस्नल डान्सरका साथै मोडलका रुपमा परिचित छिन् । उनको अभिनय र कोरियाग्राफीमा विभिन्न म्यूजिक भिडियोहरु पनि सार्वजनिक भईसकेका छन् । ईण्डियन डान्स रियालिटी शो डान्स प्लसमा समेत तहल्का मच्चाएकी युमीको चर्चा नेपालसँगै अन्य देशमा पनि फैलिएको छ । ठिमी निवासी युमीले विद्यालय तहदेखि नै नृत्य सुरु गरेकी हुन् । माध्यमिक तहको अध्ययन सकेपछि नृत्यमा व्यवसायिक रुपमा लागेकी युमीले भाईब एण्ड वेब डान्स स्टुडियोबाट नृत्यको प्रशिक्षण समेत लिएकी थिईन् । सुरुमा नृत्य क्षेत्रमा लाग्नका लागि परिवारबाट अनुमति नभएता पनि उनले परिवारलाई कन्भिन्स गरेर डान्सिङ क्षेत्रमा लागेकी थिईन् । अहिले भने उनको परिवारले पनि उनको सपोर्ट गर्ने गरेका छन् । लोकप्रिय गायकदेखि लोकप्रिय डान्स ग्रुपहरुसँग अभिनय र डान्सको अनुभव लिईसकेकी युमी हिपहप डान्सका कारण पनि चर्चामा छिन् ।